Ny lamina Sinter manana sosona dimy sosona dia vita amin'ny tariby sy savoka misy savaivony samihafa zaraina amin'ny filaharana iray, amin'ny alàlan'ny fanasivanana ny mari-pana ambony. Ny lamina Sinter manana sosona dimy sosona dia manana tanjaka lehibe kokoa noho ny media tsy misy fangarony vy, filokana ...Hamaky bebe kokoa »
Ny entona indostrialy hafanana be dia be dia be ny angovo sy akora azo ampiasaina, ary ny fampiasana azy ara-dalàna dia misy tombony lehibe ara-toekarena sy sosialy. Ny fanesorana vovoka entona misy hafanana avo lenta no teknolojia fototra hahatratrarana ny tanjon'ny fiarovana ny angovo sy ny emission mena ...Hamaky bebe kokoa »
Androany, mandeha amin'ny fiofanana mahaliana momba ny asa fitoriana izahay. Ny fananganana ekipa dia tsy isalasalana fa fomba mahomby hanamafisana ny firaisan'ny ekipa. Na izany aza, ity fananganana ekipa ity dia somary tsy mitovy amin'ny taloha. Ny fananganana ekipa teo aloha dia vondrona mpiara-miasa mahazatra manana ...Hamaky bebe kokoa »